Onogwaja - is izilwane oyintandokazi kakhulu kukhona iningi labalimi. Ubathola smart, ethule futhi limnandi. Kodwa ngeshwa, kunjalo futhi ezingezwakali kakhulu futhi athambekele izifo ezihlukahlukene. Abaningi babo elaphe izidakamizwa "Solikoks". Kuye amandla okubhekana nezinselele ezifana coccidiosis eziwuhlupho athile kanye nesikhunta. Ngaphambi kokunikeza lowo muthi, kufanele ubuyekeze ngokucophelela "Solikoksa" ukufundiswa onogwaja.
Izinkomba zisebenzisa izidakamizwa
Ngaphambi sikhuluma "Solikoksa" imiyalelo for onogwaja, kumelwe kuphawulwe a izimpawu ezimbalwa, uma zivela, udinga ukuthenga lokhu izidakamizwa:
Pet waqala zisale ngemuva ekuthuthukisweni nokukhula, liye walahlekelwa umsebenzi kanye nokuvula inhliziyo. Konke lokhu kubonisa khona emagciwaneni, umxhwele isibindi amathumbu. Uphawu obujwayelekile distention besisu.
Ukube wayesebenzise ngokucijile sawohloka uvolo.
Isibonakaliso esicace coccidiosis kungukuphula kwesitulo, isilwane ungayeka Ngeke yokugezela amasonto ambalwa, kufanele ahlole yezinyoni.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi lezi zimpawu esifanayo babe nezinye izifo eziningana ezifanayo, ngakho ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa, kubalulekile ukufuna usizo onguchwepheshe.
Yokusetshenziswa "Solikoksa" ilula ngokwanele. Amaconsi ambalwa izidakamizwa kufanele wanezela ukudla noma isiphuzo sibe isilwane. Kunconywa ukuthi wenze lokhu inqubo, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa unogwaja esiguli, kodwa wonke umndeni. Lokhu kuzovimbela izifo yansukuzonke. Umuthi senzelwe ekwelapheni ezifuywayo abaneminyaka ephakathi kwengu-ngenyanga eyodwa. Sicela uqaphele le umthamo kuvunyelwe:
Lesi sidakamizwa siyasebenza kakhulu futhi kungabangela ukucindezeleka emzimbeni. Ngakho-ke, lesi silwane kufanele usuyijwayele. Ngosuku lokuqala ungayeki ezingaphezu kuka 0.2 ml amathonsi eyodwa isilwane.
Ngosuku lwesibili umthamo kufanele senyukela 0.3 ml.
Ngosuku lwesithathu kwaba 0.4 ml.
abantu abadala anganika imithi ngokuqondile pipette, nakanjani kubalulekile ukuphuza amanzi amaningi. Ngo "Solikoksa" imiyalelo for onogwaja wabonisa ukuthi nqubo yokwelapha ithatha izinsuku ezintathu kuphela. Nokho, ezinyangeni ezimbalwa kufanele ulandele izinyathelo ukuze ugweme ukuphinda lesi sifo. Ngenxa yalesi kubalulekile okwenza lesi silwane kancane kancane ngenyanga 2 ml izidakamizwa.
Ngokuyinhloko izilwane isidakamizwa kwamukeleka kahle kodwa abanye abantu bangase babe yokungezwani komzimba kuhlasela. It kubonakala ngesimo ukulunywa, uhudo noma ukuluma kwesikhumba.
Kukhona amacala eziningana lapho kunesidingo esiphuthumayo ukubona vet. Ngokwesibonelo, uma isilwane sakho baphelelwa nenhliziyo emnyama, kukhona indle njalo (ngaphezu kuka-10 izikhathi ngosuku) kanye ikhule amehlo.
Ukuze ugweme lokhu, kubalulekile ukuba ngokuqinile ulandele "Solikoksa" imiyalelo for onogwaja futhi uhambisane umthamo ezidingekayo.
abalimi abaningi baye nazo nokusetshenziswa "Solikoksa" ukwelapha onogwaja. Ngokuyinhloko, ungezwakala Izibuyekezo omuhle ifomu elilandelayo:
Thanda ngendlela evumelana ukuyisebenzisa. Ungakwazi ngobumnene uthele okuqukethwe isitsha phakathi isipetu futhi unike imithi isilwane sakho.
Njengomhlaba yokuthi kuba ithuluzi elikahle kakhulu zokuvimbela. Ukuze bayakhohlwa ezihlukahlukene izifo, kudingeka izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto ngoba ngenyanga ukwenza inqubo efanayo.
Ikakhulukazi, wancoma ukusebenza kwaleli thuluzi, unogwaja iba lula kakhulu ngemva kwezinsuku ezimbalwa.
Cishe amaphesenti angu-90 izilwane bakwazi ukugwema engemihle.
Enye plus - kungcono ukutholakala kwezidakamizwa angathengwa ngasiphi ekhemisi.
Njengoba for izici ezingezinhle, abanye abalimi nemfuyo ungathandi intengo "Solikoksa".
It is hhayi Kunconywa ukunikeza umuthi onogwaja abakhulelwe ngalesi sikhathi kangcono hhayi abagcine bekude nozakwabo ukuthi kwakungekho ingozi yokutheleleka. Uma isilwane namanje iyagula, kunganikeza, kodwa ngaphansi kokuqondisa esiqinile of onguchwepheshe. A wezilwane ziyonquma isikhathi lapho ephephile afeze le nqubo.
Umuthi kufanele igcinwe ngokuqinile ngaphakathi esitsheni evaliwe endaweni emnyama, lo ovumelekile lokushisa amabanga kusuka degrees 5 kuya 25.
Akubalulekile ukunikeza izidakamizwa ngokushesha ngemuva Ukuqedwa ke emanzini, kubalulekile ukulinda isikhathi esithile.
Kufanele ukhulume esibaluleke kangaka, njengoba intengo "Solikoksa". Bayidayise ubungako obuhlukahlukeneko. isitsha Cishe umthamo imithi e 10 namamililitha kubiza ruble ayisikhombisa.
Onogwaja - iyona izidalwa lovely kakhulu futhi emnene. Yeka isihawu ukuthi lezi zidalwa ubuka ngokuvamile bavezwa izifo ezihlukahlukene. Kuthiwani uma unogwaja kwase izinkontileka ngegciwane futhi wagula? Kufanele kukhunjulwe ukuthi kukhona isixazululo - thatha "Solikoks". Lona omunye imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu ihlolwe kakade ezigidini izilwane uzobuya isilwane othandekayo wakho ukuphila kwezinsuku ezimbalwa.